Munamato kuna Saint Catherine weSiena. ? Kudzivirirwa, Ruramisiro uye ZveRudo.
Munamato kuna Saint Catherine yaSiena ine zvakawanda zvinangwa.
Iye anozivikanwa semumwe wevanachiremba veKatorike kutenda, saka anokwanisa kutibatsira muzvinhu zvine chekuita nehutano uye hwepanyama, hwepamoyo uye hwepamoyo.
Aive munyori uye muparidzi weshoko raMwari pasi uye achigara aine moyo une rupo uzere nerudo rwaMwari kubatsira avo vanoshaya.
Kwemakore apfuura yakave imwe yevatsvene kuti mukutenda kwechiKaturike kunoremekedzwa zvakanyanya uye izvi zvinokonzerwa nesimba rayo guru uye nezvishamiso zvinozivikanwa.
1 Munamato kuna Saint Catherine weSiena Ndiani Saint Catherine?
1.1 Namata kuna Saint Catherine kuti udzivirirwe
1.2 Munamato kuna Saint Catherine kururamisira
1.3 Munamato kuna Saint Catherine weAlexandria nerudo
1.4 Kusuwa kwemurume
2 St. Catherine weSiena ane simba here?
Munamato kuna Saint Catherine weSiena Ndiani Saint Catherine?
Akazvarwa mumhuri yakakura, ari mwanasikana wechi23 wekuroora.
Vanga vari vepakati yepakati vekumagariro vevanhu izvo zvisina kumutendera kunakidzwa nedzidzo yakanaka, zvakadaro paakange ave namakore manomwe akafunga kuzvipira mukuzvibata uye kuita tsika yekuchena yaakazadzisa kusvika kwekupedzisira kwemazuva ake.
Akararama kusvika makore makumi matatu nematanhatu uye ndiBaba Pius II avo vakamudana saSanta de kuchechi yechikatorike Kubvumbi 29, 1461.
Mumakore mashoma akatevera iye akave mutendi mutsva weItaly, akagamuchira zita reDoctor reChechi uye akazotumidzwa zita rake chikamu chePatron Saints yeEurope.
The Saint yakasiya rakakosha rakakosha iro kusvika nhasi rinoonekwa seimwe rakakosha mabasa eKereke yeKatorike.
Namata kuna Saint Catherine kuti udzivirirwe
Hie mbiri mhandara Catherine weSiena wakanaka mukadzi akakomborerwa zvikuru naMwari!
Chiridzwa cheWekumusoro-soro kushanda zvishamiso, murazvo wemwenje wekereke, chisikwa chakapihwa nezvipo zvisingaenzaniswi, zvemhandara zvinehungwaru uye zvinehungwaru nekushinga uye ushingi hwevaridzi.
Ratidza kuti simba rako rinosvika papi, vanodyara kwaMwari, vachititambira kushingairira kwese mukufambira mberi muhunyanzvi hweeevangelical, kunyanya mukuzvininipisa, kungwara, moyo murefu, mutsa uye kushingairira mukuita kwedu mabasa ehurumende yedu.
Vakaropafadzwa uye vanodiwa naIshe, wakanaka Musande Katherine nekuda kwemufaro uyo wawaka gamuchira kubva mukugona kujoina Mwari hutsvene uye kuti iwe wakawana kubva kwaari Nyasha dzekugona kufadza kuburikidza kuburikidza nezvishamiso zvako zvinopfuurira kune vakawanda vanoshaya vakaikumbira. Kunaka kwako kweUmwari kunokubatsira iwe nekukurumidza muhupenyu hwangu hwekunzwa, mumhuri yangu, mumba mangu:
Tora mumaoko angu ane simba kushushikana uye kusuwa kwekuda kwangu uye muise kunaIshe wedu kuti awanikwe nekukasira.
Ini zvakare ndinokumbira kuti mundipe dziviriro nedziviriro, uye kuti nekutevedzera hunhu hwenyu kuti ndikure muzivo yechokwadi Mwari wechokwadi uye ndiwane mukana wakanaka wevasanangurwa.
Kana iwe uchida kudzivirirwa, uyu ndiwo munamato wakakodzera kuna Saint Catherine weSiena.
Santa Catalina semuchengeti weItari neEurope anogona kutipa izvo dziviriro kwatiri zvakare Hazvina mhosva kuti uri kupi munyika.
Zvakaipa uye simba rakaipa Ivo vari munharaunda uye vanoita kuti vanhu vazadze neiyi yakaipa vibes kugadzira ml, ndosaka munamato wekudzivirira wakakosha zvakanyanya uye zvinokurudzirwa kuti zviite kanenge mazuva ese.
Mumangwanani emangwanani uye mukamuri yemhuri inova tsika yemweya iyo inotitarisira mukati mezuva rezuva rega rega.
Munamato kuna Saint Catherine kururamisira
Oo Santa Catalina wangu, ndezvipi zvinhu zvisingaiti zvawakawana, iwe ndiwe unotapira uye unerudo kupfuura wese anotichengeta, ndinokumbira rubatsiro rwako kuti udzore tariro yangu yese ...
Ndinokumbira rubatsiro rwako rwakakura kuti Mwari vari pakati pemoyo wangu nemwanakomana wake, Jesu, uye nevari kuda kundinyaradza, ndinodaidza iwe unoda kuvhura maoko ako kuti undikurudzire uye undipe zororo uye mhinduro kana zvese zvikaita sekunge zvarasika.
Saint Catherine, mhandara yakasimba uye izere nerudo, nhasi ndinosimuka nditsvage dziviriro yako yekudenga, nekuti ini handisi chinhu pasina rutsigiro rwako neyaMwari.
Mukadzi wangu anotapira uye akanaka, kupenya kunokosha kuri pamakomo, shandisa iyo nzira yangu.
Ndinyaradze undibatsire kuderedza marwadzo andinotakura pamweya wangu.
Ini ndinokumbira moyo yenyu huru kuti munzwe chikumbiro changu.
Wangu wandainzwa ndakachena uye ndakaropafadzwa Saint Catherine nekuda kwesimba risingapiwe iro Mwari raakapihwa, ndinokumbira kuti mundipe nekuzvininipisa rubatsiro renyu uye kureverera kwekunetseka uku, netariro yandakaisa mumaoko enyu anotapira uye akaropafadzwa: ndibatsireiwo
(chii chaunoda kuwana)
Ndinokutendai zvikuru nekuteerera zvichemo zvangu, nekuti ndine chokwadi chekuti munamato wangu wakanzwika nemi, uye kunyangwe zvanyanya kuoma kugadzirisa, ndine chengetedzo kamwe mumawoko ako, pasina mubvunzo zvichazadziswa, sezvo pasina anogumburwa nguva dzese kumbira nyasha dzako, kunyangwe akaoma sei.
Iwe wakarumbidzwa Musande Catherine, iwe unochemera kune zvisingagoneki, namata kuna Mwari pamusoro pekushaiwa kwangu uye nekusuwa, ndinodzosera tariro yangu yese mumunamato uyu, ndinovimba kudzivirira kwako kwerudo nguva dzose.
Mudiwa wangu Catalina anokomborera hupenyu hwangu, usamira kunditungamira munzira dzakasiyana.
Ini ndinokutevera nekutenda kukuru, kuzvininipisa uye kuzvipira.
Uku ndozvazvaive. Saka ngazvive. Saka ngazvive. Zvichava saizvozvo.
Namatira munamato weSanta Catherine Kururamisira panguva dzekushayiwa.
Sezvo aive achiri mwana, akapfuura nekunetseka nekuda kwekunge ari wepakati wepakati uye ari wemhuri yakakura.
Ziva zvakanyatsoziva kuti chii chiri kuenda nekuoma matambudziko anova kusaruramisira pamberi pameso a Mwari, ndosaka shamwari yedu vanova iye watinogona kuvimba kutibatsira mune zviitiko zvine chekuita nekushandisa chaiko pasi kana kweMweya kururamisira.
Munamato kuna Saint Catherine weAlexandria nerudo
Santa Catalina iwe unogona kuita kuti vanhu vazhinji vayananise ...
Ndiitire chinhu chidiki chidiki, nditsvage rudo, ita moyo wangu uve wakanaka uye ndeechokwadi, unoita rudo, mumoyo mangu unogona kupinda uye undizadze nemufaro.
Ndinoda kukwanisa kuziva rudo rwechokwadi, kunzwa kwechokwadi, Santa Catalina iwe une simba rakawanda mairi ...
Ndipeiwo nyasha, dai chikumbiro changu chiuye kwauri, kuti ndigamuchire maropafadzo ako, Saint Catherine anoda, erudo rwakakwana uye pasina manyepo, iwe une hunhu uye unoshamiswa kwazvo nezvose nyika zvakakwana.
Enda kwandiri uye undipe mukana wekugamuchira chikomborero chako, ndinoda kuti utumire minamato yangu zvakare.
Minyengetero yangu kuna Mwari kuti agone kuita hupenyu hwangu huzere nerudo, huzere nerunyararo, unogona kuzviita chishamiso Santa Catalina ...
Ndinokukumbira kuti undipe rudo, rwakawanda rudo uye rwakawanda rudo, mufaro, wakawanda mufaro, zvishuwo zvakanaka, pfungwa dzakanaka, zviito zvakanaka, ndibatsire kuti ndibudirire mazviri, rudo richava kwandiri sedanho, gwara ...
Saint Catherine, iwe unogona kuita zvese, ndipe uye uve nechokwadi kunzwa kwerudo uuye kwandiri, vimba nesimba rako uye nokunaka kwako.
Iwe unofanirwa kutsiva zita remunhu anodikanwa mumunamato weSt. Catherine yeAlexandria nekuda kwerudo.
Anozivikanwa semuchengetedzi wevakadzi avo ivo havana mudiwa, vadzidzisi uye vadzidzi.
Muhupenyu aive nehungwaru hukuru, ushingi, simba, hunyanzvi uyehungwaru. Izvo zvine zvese zvakakosha kutipa rubatsiro rwakakodzera mune zvekunzwa moyo.
Zvinogona kutibatsira kuyambuka nzira yedu nemunhu iyeye akatarirwa isu kana, kana zvichidikanwa, zvinotibetserawo kuchengetedza kuwirirana mudzimba umo rudo ruri munjodzi yekufa.
Tichafamba takananga munamato wekusuwa murume weSanta Catalina de Siena.
Wangu Akarumbidza Musande Katherine,
Imi makanaka kunge zuva, akanaka se la luna, uye yakanaka senyeredzi.
Zvawakapinda mumba maAbhurahama, uye ukapwanya varume zviuru makumi mashanu, vakashinga seshumba, unorerutsa moyo we (taura zita remunhu) kwandiri.
(Taura zita romunhu wacho) kana achindiona, achabuda hake achienda kwandiri, kana avete, haangarara, kana achidya, haadye.
Haazogadzikane kana asina kuuya kuzotaura neni.
Iye achandichemera, uye iye achagomera, seMhandara Maria akagomera nemwanakomana wake akaropafadzwa.
(Taura zita remunhu katatu, ichirovera rutsoka rwekuruboshwe pasi),
Pasi petsoka yangu yekuruboshwe ndine iwe pamwe neatatu, kana nemazwi mana, kana nemoyo wako.
Kana iwe uchifanira kurara, iwe haucharara, kana iwe uchidya, iwe haudye, hauzogara sekureba kana usingauye neni kuzotaura uye kundiudza kuti iwe unondida, uye ndipe zvese zvakanaka zvaunazvo.
Iwe uchandida pakati pevakadzi vese vari munyika, uye ini ndichagara ndichazviratidza kwauri ruva rakanaka uye rakatsva.
Iwe unofunga, uyu munamato kuna St. Catherine kushaya tariro yemurume chishamiso!
Uyu munamato Haisi chishandiso chekusaudzira vanhu kupokana nezvavaida, pane icho chinova chiito cherudo nekutenda icho kubva kudenga chinokomborera chatinowanzo svina nezviito zvedu.
Iye murume anga abva kumba, anga afunga ibva pamba kana rudo rweukama Anogona kudzoka aine kusuwa kuve nezvaakasiya zvekare. Ndicho chikonzero chikuru chemunamato unokosha uyu.
St. Catherine weSiena ane simba here?
Chero iwe paunotenda unokwanisa kutibatsira mune chero mamiriro ezvinhu atinoda.
Kunyangwe zvakaoma sei kana zvisingaiti mamiriro ezvinhu atinozviwana isu, tinogona kugara tichibvunza nokutenda kwakasimba kuti chishamiso ichi chinouya negodo nekukurumidza kupfuura isu chatinotarisira.
Gara uchitora mukana we simba remunamato kuna Saint Catherine weSiena!
Minyengetero ine simba uye inoshamisa kunaSanta Barbara
Munamato wakasimba kuna Saint Helena